Xalka buuxi maktabadda music Lugood
Mar kasta waa ay dhibaato ku saabsan sida loo hagaajin maktabadda. Sababtan awgeed TunesGo idinku Arzaaqay xal dhowr ah. Waxaad fursad u socday online iyo helitaanka music naftaada. Waxaa intaa dheer in, software TunesGo sidoo kale bixisaa sida aad tagi kartaa channels dhowr ah oo fudud u download music.
Tababare maktabadda Lugood
Maamul, ogaado iyo wadaagno music la TunesGo, ee Lugood Saaxiibkiis fiican ee Android iyo macruufka. .
Bedelka xogta aad ka iPhone, iPad ama iPod dib Lugood aad
1. Raadi iyo download music online
Si ka duwan ciyaartoyda kale, TunesGo taageertaa tiro balaadhan oo ah dhufto ee muusikada. Waxaad si fudud u ka websites weyn sida Youtube, vimeo iyo kuwo badan oo kala soo bixi kartaa music. Ma aha oo kaliya in Gurtida tagaan si toos ah loogu badalo doonaa video galay mp3 oo aad u fududahay in aad ku darto oo aad maktabadda. Ma aha oo kaliya in, waxaad ka heli kartaa macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan heesta oo aad soo bixi, tan iyo markii ay downloads loo dhan yahay macluumaadka. Uma baahnid inaad sugto xiriir kasta, ama xitaa website ka mid ah inuu u ciyaaro, kuwaas oo heeso bixi. Waxaad songs, kuwaas oo si toos ah uga ciyaaryahanka ka ciyaari kara. No Maxaynu qof oo dheeraad ah faahfaahin kana in aad u baahan tahay in la raaco. Si fudud u dejisan oo wuxuu ku raaxaysan.
Download TunesGo waxba uma dhimayso tayada heesta badan sida software kale. Waxaad ka heli dhawaaqa firfircoon la faahfaahin kasta macno ah ma samaynayso website aad ka soo dejisan aad music.
Haddii aad rabto in la abuuro toobiye ah website aad u isticmaali ugu soo bixi music, si fudud u riix qaybta ka mid ah ku darto software cusub. Tani waxay ku siin doonaa laba fursadaha in ay tahay in ay galaan URL ka mid ah website-ka dibna sidoo kale ku qor magaca toobiye ah.
2. Record music ka Radio online
Waxa kale oo aad fursad u recordin ka tunesGO. Iyadoo ciyaaro music aad fursad u haysataa ee waxaa sidoo kale lagu qoro. Aad dhinaca gacanta bidix, garaac ikhtiyaarka ah oo taariikhqorihii iyo bilowdo qoro.
Ka dib markii kuwan raadkaygay kuwan, ama xataa wax kale oo aad jeclaan lahayd inaad u qortid, TunesGo si toos ah u abuuraa playlist ah oo taariikhqorihii raadkaagu. Uma baahnid in aad si aad u hesho ka kaaftoomi kasta. TunesGo si fudud u badbaadin doonaa mustaqbalka oo aad dhagaysan kartaa iyaga waqti kasta oo aad rabto. Waxaad heli doontaa, kuwaas oo kuwan raadkaygay ku badbaadi in aad maktabadda. Hadda waxaad ka ciyaari kartaa music duubo mar kasta oo aad rabto in aad ka.
3. Ku dar music ka iPhone maktabadda Lugood.
TunesGo ma ahan oo kaliya xal u ah music joogto ah. Waxaad lagu diyaarin karaa playlists aad ku TunesGo iyo waxa ay sii kordhineysaa in aad maktabadda iPhone ama Lugood. Waxaad si fudud u baahan tahay inaad guji tab ah oo la yidhaahdo "dhoofinta" dooro oo weligood ikhtiyaarka ugu fiican kuu shaqeeya. Haddii aad rabto in aad badbaadin heesaha oo si aad u computer ama maktabadda Lugood ah, si fudud guji doorasho iyo ha software cajiibka ah ay shuqul qaban.
4. Ku dar music ka Android inay maktabadda Lugood
TunesGo ma ahan oo kaliya in xal loo helo waxyaabaha Apple, laakiin waxa ay ka reebtay caqabadaha u dhexeeya qalabka macruufka iyo Android ku salaysan. Hadda waxaad si fudud u isticmaali kartaa TunesGo si ay u maareeyaan maktabadda android iyo sidoo. TunesGo yahay xalkaaga aad hal talaabo u maareeyo jiray cayn kasta oo playlists, ma waxa qalab aad isticmaalayso arrinta. Si fudud u xirmaan qalabka android la your computer, TunesGo si toos ah waxaa lagu ogaan doonaa oo idin siiyo doorasho ah haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan maktabadda. Riix doorasho iyo maktabadda si toos ah u soo TunesGo meesha aad ku haboon u maamuli laga yaabaa.
5. nadiifi Lugood maktabadda music
Nadiifinta ilaa maktabadda weligii fudud. Ha illoobin geedi dheer oo culus soo jeediyay in Lugood, si fudud u dooran TunesGo u maamuli lahayd maktabadda. Waxaad fursad u haysataa ilaa nadiif ah marka aad dooran maktabadda.
Doorashadan waxa ku soo dejin doonaa saabsan playlist Navas kaasoo aad ka mid ah. Oo weliba heesaha oo dhan waxaa la baari doonaa. Haddii aadan rabin in aad ku dartid file a in habkan nadiifinta, si fudud u uncheck. Dhinaca sare waxaad arki doontaa tab nadiif-up halkaas oo dhawr fursadood oo hoos-hoos ayaa la siiyaa.
Tani waxay keenaysaa in aad fool ka fool leh qaar ka mid ah fursadaha, waxaad dooran kartaa ka
Tags music dayactir
U dayactir daboolida music
Kuwan raadkaygay maqan Nadiifi
Delete songs nuqul
6. Maamul music maktabadda Lugood
Ma dooneysaa in aad u maamuli lahayd music? TunesGo waa xal. Waxaa jira waqtiyo aan dooneyno inaan aadno oo ku saabsan badbaadinta aad music galay files oo fayl la song walba u taagan in sida saxda ah. Si fudud u tagaan si ay fursad u ah "Add", halkaas oo aad ka arki doonaa in aad sidoo kale ku dari kartaa file ah ama gal ah. Samee gal ah si ay u maareeyaan playlist gaar ah oo aad leedahay, waayo, waqtiyada qaarkood sida gyming, nasashada ama xataa drive fudud.
7. Share Your Music
TunesGo gelineya inaad la wadaagto aad music dhowr dhufto. Si fudud u dooro heeso ah oo aad rabto inaad la wadaagto iyo ka jaftaa on ikhtiyaarka ah share.
8. songs Delete
Waxaad si fudud u tirtiri kartaa heeso iyaga oo xulashada iyo siyoodba icon tirtirto.
Jidadkiisa oo dhammu ay u gudbiyaan Lugood in Computer kale
Download Free Lugood harag ah Lugood 10
> Resource > Lugood > Xalka buuxi Lugood Music Library